Kana Iwe Uchida Chero Humwe Humbowo HweMafoni Impact pane Bhizinesi | Martech Zone
Kana Iwe Uchida Chero Humwe Humbowo HweMafoni Impact pane Bhizinesi
Takaenda padanho rehunyanzvi uko mawebhusaiti akaonekwa senzira huru pakati pekasitoma nebhizimusi. Maforamu evashandisi, maFAQ, madhesiki ekubatsira uye email zvakashandiswa mukugadzwa kwenzvimbo dzinodhura dzemafoni uye nenguva yakabatana yavakatora kugadzirisa nyaya dzevatengi.
Asi vatengi nemabhizinesi zvakafanana vari kuramba makambani ayo asingatore foni. Uye yedu mbozha webhu, nhare mbozha uye mbozhanhare nyika zvino inoda kuti mumwe munhu apindure kune rumwe rutivi rwefoni yavo. Kunyangwe kana vatungamiriri nevatengi vasiri kutaura newe kunyanya kuburikidza nefoni - iyo chokwadi chekuti ivo anogona inotora chikamu mukutendeseka kwehukama - kukanganisa danho rekutenga.
IfByPhone yakagadzira infographic inoratidza iro basa mafoni akamboita mukushandura chitoro. Ivo vanoratidzira matatu matanho ane basa kune vese vatengesi - kwete avo chete vane danda mune zvekutengesa - kuti iwe utarise kana iwe uchifunga nezve mobile kushambadzira.
30 mabhiriyoni inbound yekutengesa mafoni akagadzirwa kubva mukutsvaga kwe mobile muUS muna 2013 uye 73 bhiriyoni anotarisirwa mu2018.
70% yevanotsvaga nhare vane akabaya Bhatani bhatani mune zvekutsvaga maererano neGoogle.
61% yevatengi vanotenda kuti zvakakosha kuti mabhizinesi avape nhamba yefoni yekufona uye 33% vakati vangangodaro vashoma kushandisa uye kureva marangi asina.
IfByPhone inopa izwi-based kushambadzira otomatiki sisitimu iyo inobvumidza makambani kubatanidza, kuyera uye kukwidziridza kutengesa uye mafoni ekufona.
Tags: ifbyphonekutengeserana kwenharemobile yemunharaunda kutsvagamobile optimizationmobile kutengamobile retailmobile searchkutenga sarudzo